China DC01 CRC warshad qaboojiyaha qaboojiyaha iyo soo saarayaasha |Zhanzhi
Xaashiyaha birta duuban ee qabowgu waxay ka samaysan tahay gariiradaha birta duuban ee kulul kuwaas oo lagu giringiriyey heerkulka qolka kana hooseeya heerkulka recrystalization.Inta badan waxay qabataa darajada birta ee kaarboon-yar, taas oo u baahan qaloocin qabow oo wanaagsan iyo waxqabadka alxanka iyo waxqabadka shaabadda qaarkood.
2.Grade: DC01, DC02, DC03, DC04, iwm.
4. Dhumucdiisuna: 0.12-4.0mm
GRADE HEERKA DIMENSION, MM CODSIGA
Dufan SS Ballaca Dhererka
DC01.DC03 DC04 DCO5,DC06.DCO7, SPCCT-SD, SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD, SPCG-SD Q/WG(LZ)20-2008 EN 10130:1998 JIS G 3141:2005 0.2 - 3.0 600 - 2050 La habeeyay Qaybaha iyo qaybaha samaynta sawirka guud iyo qoto dheer
GRADE XOOG BADAN MPA XOOGGA TINSIINKA MPA DHEERAAD % tusmada caagagga HARDEN INDEX
Sababtoo ah waxaa lagu duubaa heerkul caadi ah oo aan soo saarin miisaan, saxanka qabowgu wuxuu leeyahay tayada sare ee tayada sare leh iyo saxnaanta cabbirka sare, iyo sifooyinka farsamada iyo tiknoolajiyada ayaa ka sarreeya kuwa xaashida kulul ee kulul.Meelo badan, gaar ahaan dhinaca wax soo saarka qalabka guriga, waxay si tartiib tartiib ah u bedeshay birta duuban ee kulul.
Farqiga u dhexeeya xaashida birta duuban ee kulul
1) Midabo kala duwan
Dusha sare ee saxan-kululku waa bunni, midabkuna waa mid aan iswaafaqayn, ama bai ayaa du qaabaysan oo aan saliid lahayn.
2) geeso texture kala duwan
Qaabka saxan-qabowgu waa mid jilicsan oo siman, cidhifkuna waa nadiif
Dusha sare ee saxanka kulul ee la dubay waa qallafsan yahay, qaabku maaha mid joogto ah oo qabow, mararka qaarkoodna cidhifyadu waa kuwo aan caadi ahayn.
3) Tilmaamo kala duwan
Taarikada qaboojiyaha guud ahaan waa dhuuban oo dhumucdiisu ka yar tahay 3.0mm (marka laga reebo habaynta), caddaanka silvery waa saxan galvanized ah, midabkuna waa saxan midab leh.
Taarikada duuban ee kulul waxay guud ahaan ka badan yihiin 1.5mm (marka laga reebo kuwa la habeeyey), kuwa ugu khafiifsan kama yara yaraan 1.0, waxayna leeyihiin qaabab oksaydh ku-tiirsanaan heerkul ah.
4) Adag oo kala duwan
Saxanka qabow-rogidku wuxuu leeyahay engegnaantiisa sare waana adag tahay in la habeeyo, laakiin ma fududa in la beddelo oo waxay leedahay awood sare;Saxanka birta duuban ee kulul ayaa leh adayg hoose, habayn sahlan iyo ductility wanaagsan.
5)Habab wax soo saar oo kala duwan
Wareegga qaboojiyaha waxaa lagu fuliyaa heerkulka caadiga ah, saxanka birta ah ee qaboojiyaha ayaa leh awood ka fiican iyo dhumucda qabow ee duuban waa mid yar;Saxan bir ah oo kulul ayaa lagu rogrogaa heerkul sare, kaas oo leh ductility wanaagsan, saxan birta duuban ayaa yeelan karta dhumuc weyn.
Sheyga birta duuban ee qabowgu wuxuu leeyahay sifooyin wanaagsan, taas oo ah, birta xariijinta qabow-duuban iyo saxan birta leh dhumuc yar oo sax ah ayaa lagu heli karaa duubid qabow, oo leh fidsanaan sare, dhammaystir sare oo dusha sare ah, dusha nadiif ah oo dhalaalaya oo saxan qabow duuban. daahan fudud processing, noocyo kala duwan oo badan iyo codsiyada ballaaran, iyo sidoo kale waxa uu leeyahay sifooyinka waxqabadka stamping sare, ma gaboobay iyo dhibic dhalidda hooseeyo, sidaas saxan qabow-rogid uu leeyahay tiro balaadhan oo ah codsiyada, inta badan loo isticmaalo baabuurta, durbaannada birta daabacan, dhismayaasha, qalabka dhismaha, baaskiilada iyo wixii la mid ah.